Amanzi akwi-Intracoastal ajonga usapho olutofotofo lokubuyela umva
Indlu eyonwabisayo ngokungafaniyo nenye esiqithini! Yenzelwe iindwendwe ezixabisa amava eenkwenkwezi ezintlanu. Le ndlela yokubalekela eyobunewunewu ikude kunesiqhelo, igqibelele nje.
-Ekunene kwibala legalufa laseWild Dunes elaziwayo kwihlabathi
- Kuphela .5 yeemayile ukusuka elunxwemeni
-Yonwabela IMBONO EMNZAYO YOKUTSHONA KWELANGA KWI-INTRACOASTAL WATERWAY ukusuka kwiiveranda ezipholileyo
- Iibhedi zenkosi ezi-3 kunye neebhedi ezi-6 ezingatshatanga
Lususe uxinezeleko kwitubhu yethu yabantu aba-2 okanye kwibhafu yabantu abasi-8
-Ijimu exhotyiswe ngokupheleleyo, i-sauna ye-infrared, ibhayisekile ye-peloton
Ndibuze ngamaxabiso athotyiweyo okuhlala ixesha elide ngoJanyuwari nangoFebruwari
Ukuba le ndlu ayifumaneki ngeentsuku ozikhethileyo okanye ungathanda into eyahlukileyo, kodwa iyamangalisa ngokulinganayo, jonga kolunye uluhlu lwam eziqithini. Cofa ngokulula kwilogo yam kwaye uskrolele ezantsi ukuze ubone lonke uphononongo kunye noluhlu!
- Yintoni eyenza eli khaya likhethekileyo?
Indawo egqibeleleyo yokubaleka yonke imihla kwaye uhlaziye umzimba kunye nengqondo yakho. Eli phupha limangalisayo le-intracoastal lineeveranda ezinkulu, ezilungele ukuhlala kunye nokonwabela imvakwemini eyonqenayo. Ibekwe ngokugqibeleleyo ukuze ukwazi ukuhambahamba uye elunxwemeni kwaye ugcakamele ukutshona kwelanga kwibala legalufa kunye nomgaqo wamanzi!
Yakhelwe ngobuqhetseba beMeditera! Indlu inombono ovulekileyo; Uyilo lulungele ukonwabisa abahlobo, iintsapho okanye ii-bachelorettes zonwabela oko uCharleston unokunikela.
Kwaye ngenxa yokuba ziyinxalenye yentsapho nazo :) izinja eziqeqeshwe ngeembiza zivunyelwe. $100 umrhumo isilwanyana ngasinye. (ukuya kwi-2)
Ukuba ufuna ukophula ukubila, sebenzisa ijim exhotyiswe ngokupheleleyo, i-sauna ye-infrared, okanye ungene kwiakhawunti yakho ngebhayisekile ye-PELOTON.
Kuthekani ngomjikelo wegalufa? indlu ilungile kwibala legalufa. Indawo yokuphumla yaseWild Dunes edume kwihlabathi ineekhosi zegalufa ezimbini ezinemingxuma eli-18.
-Ikhaya lakho kude nekhaya
Sizama ukuthi ZONKE iibhedi zezinye zezona zilungileyo owakhe waphumla kuzo!
Amagumbi okulala ama-3 amakhulu ngokungaqhelekanga, ngalinye linebhafu yabucala, ibhedi yenkosi, kunye nebhedi yeentsuku ezimbini kunye ne-trundle yamawele. Kuba zizonke 3 iibhedi ubukhulu ukumkani kunye 6 iibhedi single.
Kukho master suite enye kumgangatho wokuqala, nokufikelela kwiveranda phantsi kwemithi ye-oki. Umgangatho ophezulu unamagumbi amabini okulala. Elinye ligumbi elinobukhazikhazi, elineengcango zeglasi ezinkulu ezivuleleka kwindawo ebanzi enebhafu yangaphandle. Ubusuku bothando bunokuchithwa apho, bujonge ukutshona kwelanga okanye iinkwenkwezi ezineglasi okanye ibhotile yewayini :) Yiloo nto eyenziwa ngamaphupha amnandi kunye ne-honeymoons.
Ukupaka iimoto ezi-4 kunye neyongezelelweyo yokupaka ngaphandle kwesitalato ekhoyo.
Zonke iindawo zokuhlala ziquka ukunikezelwa kokuqala kweelinen kunye neetawuli, iitawuli zaselwandle kunye nezihlalo, i-washer kunye ne-dryer, ukunikezelwa kokuqala kweemveliso zephepha kunye ne-detergents, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-dinnerware, i-flatware, iimbiza kunye neepani. I-WIFI kunye neeTV ze-ROKU ezihlakaniphile kuwo onke amagumbi, Sibonelela ngokufikelela kwiNetflix.
Kukho izibane ezishukumayo ezivuliweyo ezinevidiyo ngaphandle kwendlu ukuze ukhuseleke.
AKUTSHAYWA. NCEDA UQAPHELE: KUFUNEKA UBUDALA BEminyaka engama-25 UBUDALA UKUZE URESHISE UNGACHATHANGA NGAMANDLA. NGOKUQHELEKILEYO AKUKHO maqela avunyiweyo. ukuba imibuzo ndithumele umyalezo.
Ikhaya LIKWENZENI kwikona ukusuka kwiziko lokuzonwabisa le-IOP elibonelela ngepaki yezinja, indawo yokudlala, iinkundla zebhola ekhatywayo kunye ne-basketball, kunye nepaki yabantwana. Ikufuphi negumbi lokutyela elimnandi kunye neZiko leDolophu yaseMt. Pleasant elineevenkile ezinkulu, imiboniso bhanyabhanya yale ndawo, iivenkile ze-ayisikrimu kunye nolunye uhlobo lokuzonwabisa. Yimayile nje ezili-12 kumntla weCharleston yembali. Ikwakuhambo olufutshane ukusuka kwi-Isle of Palms Marina yenkonzo epheleleyo yaseMarina enerenti yezikhephe kunye neetshatha.